မန္တလေးမြို့တွင် လှောင်အိမ်ဘောလုံး ကွင်းငယ်များ စတင်ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့တွင် လှောင်အိမ်ဘောလုံး ကွင်းငယ်များ စတင်ဖွင့်လှစ်
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၄
မန္တလေးမြို့တွင် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Panna football Cage (လှောင်အိမ်ဘောလုံးကွင်းငယ်)များကို မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၅၅ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းထောင့်ရှိ လပ်ကီးဟုမ်းဖူဆယ်ကွင်းအတွင်း နိုင်ငံခြားဘောလုံးကလပ်နည်း ပြများ၏ သရုပ်ပြခတ်ကစားမှုနှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Panna ဘောလုံးကစားနည်းကို လက်ရှိကမ္ဘာကျော်ဘောလုံး ကစားသမားတွေတောင် နှစ်ခြိုက်စွာ လေ့ကျင့်ဆော့ကစားနေကြပါတယ်။ ဘောလုံးနည်းပညာလေ့ကျင့်ရေးမှာ အထောက်အကူဖြစ် အောင် အခုလိုမျိုး ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ဖွင့်လှစ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အခုကွင်းငယ်တွေကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီ တည် ဆောက်ထားရာမှာ ကွင်းတစ်ခုရဲ့ အကျယ်အဝန်းကတော့ ၁၂ ပေ ပတ်လည်နဲ့အမြင့်က ရှစ်ပေပဲရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်ကို တစ်ဦးချင်းစီ ဝင်ရောက်ကစားနိုင်သလို ကွင်းအနေအထားအရ တစ်သင်းနှစ်ဦးစီ၊ သုံးဦးစီအထိကစားနိုင်ပြီး အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာအတိုင်းပဲ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ လှောင်အိမ်ဘောလုံးကွင်းငယ်တွေကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု Royal Lucky Home Group of Companies မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်သီတာစမ်းက ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂျူဗင်တပ်ဘောလုံးကလပ်မှ နည်းပြ Mr.,Alfio Plebani ၊ အင်တာမီလန်ဘောလုံးကလပ်မှ နည်းပြ Mr.,Joseph Martegani တို့နှင့်အတူ မြန်မာ့လက် ရွေးစင်ဘောလုံးသမားဟောင်း ဘိုဘိုအောင်နှင့်ညီညီထွန်းတို့က Panna Football Cage ကစားနည်းကို သရုပ်ပြကစားခဲ့ကြပြီး ဖလား ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုလည်း မကြာမီကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
MRCCI ၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းတွင် ပါဝင်သည့် သတ်မှတ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်မှုအစ?
Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဆွေဝင်း၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းတွင် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက် အမိန့်ချ?
ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား လက်လီလက်ကား ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဦးစားပေး ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စု
တစ်လမ်းပိတ်၊ တစ်လမ်းဖွင့် စနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်-တောင်ငူ ရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိ??
ချင်းပြည်နယ်အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လေယာဉ်ကွင်းငယ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှ
ဘဏ္ဍာရေး မျှခြေစည်းမျဉ်းဖြင့် ငြိစွန်းနေသော ပီအက်စ်ဂျီမှ နေမာ သို့မဟုတ် အမ်ဘာပီကို ခေါ်ယူရန?
တက္ကသိုလ်ဂေါက်သီးကစားသမားများကို နိုင်ငံခြားနည်းပြဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးမည်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် သစ်တော သယံဇာတ ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထ